यदी यसरी नै उत्तरदाताको प्रश्नलाई लिदै जाने हो भने मैले कलम बन्द गरे हुने रहेछ किनकी यि प्रश्न मेरा भन्दा निकै गहकिला र तार्किक थिए । आश गरौं, यस्ता प्रश्न उठिरहुन प्रत्येक युवा मनभित्र, केही उत्तरको अपेक्षामा। उनका एउटा र अर्को आँखाले क्रमश: राजनिती र विकासलाई जनाउदै थिए ।
” यहाँ यही नै भैरहेको छ । राजनितीमा सबैको आँखा छ तर विकास तिर एक फेर फर्केर नि हेरिएको छैन । राजनिती डामाडोल छ भन्दैमा विकासलाई पाखा लाउन त भएन नि । यि तिन दलले हात मिलाएर केहि हुन्न, गम्लाङ् अंगालो हाल्न सक्नुपर्‍यो एक अर्कालाई ।” गतिलो प्रश्न सोधेर मेरो मन जितेका २७ बर्षिय,अनुभव राजनिती तर्फ ईशारा गरिरहेका थिए ।
” एक अंगालोमा बाधिनुपर्छ भन्ने, अनी अंगालोको घेरा साँघुरो बनाएर अघि बढेर के हुन्छ ? बातावरण बनाउनुपर्‍यो, दुवैतर्फबाट आफुलाई नुहाइ धुवाइ।” अब भने दुवै साथीले भन्न खोजेको कुरा प्रस्टिए जस्तो देखियो, ऋषि जो ‘हो’ संकेत स्वरुप टाउको हल्लाउदै थिए ।
” एक यस्तो हात मिलाई सम्भव छैन ?एकका गुण अर्कोमा सरिहाल्ने ?”
” जज बुश, अनुभव गरौं न कैयौ इराकी जनताको रगतले रंगिएको हात कस्तो छ भनी “
“त्यो पनि नारी पुरुषको, अली सुहाएन” उनको असन्तुष्ठी यसरी पोखियो ।
के साच्चिकै हाम्रो लोगोमा हाम्रो नेपाली शैलि झल्किन्छ र ?? के नेपालको लोगो यस्तै हुनु पर्ने हो ???
प्रश्नोत्तर साह्रै राम्रो लाग्यो मलाई। उत्तरहरु हेर्दा हाम्रो नयाँ नेपाली पुस्ताप्रतिको आत्मविश्वाश झन् बढ्यो ममा। मलाई जहिलेपमनि लाग्छ, हामी नेपालीहरु सबैतिर सक्षम र चिन्तनशील छौं तर जो राजनीतिमा छन् तिनले यस्तो सक्षमता र चिन्तनशीलता देखाउन सकेका छैनन्। अहिलेको राजनीति हाम्रो एउटै महारोग हो।
र लोगोको कुरा। नेपालीपन झल्किन्छ कि झल्किन्न त्यो वहसको विषय हुनसक्छ किनभने हामीले नेपाली भनेर मानिआएका धेरै प्रतीकहरु यसमा समाविष्ट छन्। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने, यो अत्यन्त भद्दा र कलात्मकतावीहिन छ। राम्रा कुराहरु अटेसमटेस खाँदेर राख्दैमा सौन्दर्य झल्किन्छ भन्ने मूर्खता हो, सौन्दर्यका लागि सन्तुलनको पनि उत्तिकै जरुरत हुन्छ। हाम्रा राज्यसंचालकहरुको कलाचेत कति तल्लो स्तरको छ भन्ने कुरा यहि लोगोले देखाऊँछ।
हा हा हा, साह्रै गज्जब को लाग्यो अन्तर्वार्ता । कसैलाई झटारो हान्न त अमेत्य बाट सिकयोस् ! तर एउटा कुरा, यो ईनभर्टेड कमाहरु चाँहि किन सबै उल्टो हँ, कि यसको नि अर्थ छ ! हा हा हा
आहा! कति राम्रो कुरो उठाउनुभयो । प्रश्नोत्तर पढ्न रमाईलो भईरहेको थियो अन्तिमको कुरो त ठ्याक्कै मुटुमै गाडियो । लोगोकोक कुरो साँच्चिकै सोचनिय छ ।
'राजनिती डामाडोल छ भन्दैमा विकासलाई पाखा लाउन त भएन नि'
यहि कुरो मलाई नि लाग्छ सधैँ । एकपटक रेडियो कुराकानीमा सुनेको थिएँ Srilanka को वारेमा । LITTE पुर्ण सक्रिय भएको अवस्थामा राजनिति पुरै भताभुङ्ग भएको थियो त्यहाँ पनि । तर आर्थिक वृद्दि र विकास रोकिएन । यि कुराहरूको राजनिनिसँग संवन्ध त हुन्छ तर अस्थिरताको परिस्थिति भन्दैमा विकासमा काममा खुट्टा कमाउनु चैँ पक्कै नहुने रैछ । हामी स्वभावैले धेरै RISK लिन चाहदैनौँ । Long Term Loan थाप्लामा लिन नचाहने…वरू सके घर जग्गै वेचेर ऋण तिरिहाल्ने । यो प्रवृतिले गाँजेको छ सवैलाई । लगानीको लागि अनि विकासको लागि अलिकति साहस र हिम्मतको कमि चैँ भएकै हो ।